Suxufi Ibraahim - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Saxafi Ibraahim)
Nebi Ibraahim (c.s) waxaa lagu soo dejiyay kitaabka Suxufiga.
Suxufi Ibraahim Kitaabka Suxufiga ee Nabi Ibraahim (ingiriis: Scrolls of Abraham; carabi: ﺻﺤﻒ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ, "suxufi ibraahim", ﮐﺘﺎﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ, "kitaab ibrahim"; Af-Soomaali: qoraaladii Nebi Ibraahim, "suxufi ibraahim") waa kitaab diini ah oo Ilaahay (koreeyee) ku soo dejiyay Nebi Ibraahim. Qoraaladaasi waxaa khubarada diinta Islaamku u aqoonsan tahay ineey yihiin waxyigii Alle ku soo dejiyay Nebi Ibraahim; kuwaasi oo uu qoray Nebi Ibraahim naftiisa iyo isku duba rideen intii raacsanayd asaga ka dib markii uu geeriyooday.
Kitaabka Quraanka kariimka ah ee saldhiga u ah diinta Islaamka, waxaa suurado badan iyo aayado badan lagu xusay qoraalada suxufiga ee Nabi Ibraahim.
↑ "Suxufi Ibraahim Kitaabka Suxufiga ee Nabi Ibraahim"
↑ ingiriis: Scrolls of Abraham; carabi: ﺻﺤﻒ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ, "suxufi ibraahim", ﮐﺘﺎﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ, "kitaab ibrahim"; Af-Soomaali: qoraaladii Nebi Ibraahim, "suxufi ibraahim"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Suxufi_Ibraahim&oldid=166518"
Last edited on 16 Febraayo 2017, at 12:13
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Febraayo 2017, marka ee eheed 12:13.